Ergooyin horleh oo soo gaaray Shirka Hiiraan iyo Sh.Dhexe Jowhar – Mareeg.com somalia, World News and Opinion.
Jowhar (Mareeg.com)—Guddoomiye ku xigeenka dib u heshiisiinta iyo Federaalka ee Maamulka Gobolka Sh.Dhexe, Abuukar Cali Maqaneey ayaa sheegay ku dhawaad 100 Argo oo ka soo jeeda Gobolka Hiiraan iyo kuwa kale oo ka kala yimid Magaalada Muqdisho iyo Magaalooyin kale in ay ku sugan yihiin Magaalada Jowhar islamarkaana la filayo Ergooyin kale oo hore in ay ka yimaadaan Gobolka Hiiraan.
Abuukar Cali Maqaneey, Guddoomiye ku xigeenka dib u heshiisiinta iyo Federaalka ee Maamulka Gobolka Sh.Dhexe ayaa sheegay in weli Magaalada Jowhar ay ka socoto xulista Ergooyinka sida rasmiga ah uga qeyb galaya Shirka Maamul u sameynta labada Gobol waxuuna tilmaamay in Wasaarada arimaha Gudaha ee Soomaaliya looga fadhiyo soo dhameystirka Ergooyinkaasi.
Geesta kale, Guddoomiye Abuukar Cali Maqaneey ayaa sheegay in amaanka Magaalada Jowhar uu yahay mid wanaagsan kadib markii ay adkeeyeen Ciidamada qaabilsan amaanka.
Magaalada Jowhar ayaa waxaa ka socda dhaq dhaqaaq Xoogan oo ku aadan Shirka Maamul u sameynta Gobolada Hiiraan iyo Sh.Dhexe oo dhawaan uu furay Madaxweynaha Soomaaliya inkastoo aanu weli la dhameystirin Ergooyinka sida rasmig ah uga qeyb galaya Shirkaasi.